မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သမ်းလာတဲ့ 'Edge of Tomorrow 2' - MoviesFan
မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သမ်းလာတဲ့ ‘Edge of Tomorrow 2’
Tomb Cruise က ပြောလိုက်၊ Doug Liman ကပြောလိုက်နဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကြာ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ Edge of Tomorrow2ဟာ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ တော်တော်လေးကိုသေချာနေပြီလို့ ပြောလို့ရပါပြီ။ ပထမဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Doug Liman ရော၊ မင်းသားကြီး Tom Cruise ရော၊ မင်းသမီး Emily Blunt ရောတို့က Edge of Tomorrow ဒုတိယဇာတ်ကားကို ဆက်လက်ရိုက်ကူးဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အကောင်အထည်ဖော်နေကြတာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Liman ကိုယ်တိုင်က Edge of Tomorrow2အကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့က တော်တော်နီးစပ်နေပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် ဒီ Sci-Fi ဇာတ်ကားရဲ့ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ချက်ထားလို့ရပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
Liman ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် သူတို့တွေဟာ အဓိကပါဝင်မယ့်သူတွေနဲ့ အချိန်ဇယားတွေညှိနှိုင်းပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ အခုဆိုရင် ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းကိုစတင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားဟာ စတူဒီယိုကအတင်းခိုင်းလို့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးရမယ့်ဇာတ်ကားမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် စိတ်တိုင်းကျဇာတ်ညွှန်းမရမချင်း အေးအေးဆေးဆေးအချိန်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဇာတ်ကားတကယ်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် Liman ရော၊ Tom Cruise ရော၊ Emily Blunt ရော သုံးဦးလုံး အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ကြိုးစားရလောက်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်ညွှန်းရရှိပြီမို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Liman က ထပ်ဆောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။
We’re just working on the script… [We’re no longer working on scheduling issues], now it’s down to we haveawindow where we could go do it, and we’re frantically working on the script. It’s one of those movies that we’ll only go make if we love the script. It’s not one of those things where the studio is pushing us to make it and they don’t really care if it’s good or not. If the movie happens, it will be because Emily Blunt, Tom Cruise and myself are passionate about making it, which isagreat place to be. She doesn’t need this movie, he doesn’t need this movie, and I don’t need it. We’re gonna make it if we really believe in it. We have story that the three of us love, so we’re working hard on the script. Collider
“ဘယ်အချိန်လောက်စရိုက်ဖြစ်မှာလဲ? Edge of Tomorrow2က Liman ရဲ့ နောက်ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကားဖြစ်မှာလား?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ “Edge of Tomorrow2က သူ့ရဲ့ နောက်ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်” လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရင်း နောက်လာမယ့်သတင်းတွေကိုနားစွင့်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: Guardians of the Galaxy Vol.3 က ၂၀၂၀ ထဲထွက်မယ်လို့ ဒါရိုက်တာ James Gunn ကပြောကြား
Next Post: Superhero အယောက် ၄၀ လောက်ပါဝင်မယ့် Avengers: Infinity War